Goatemalà: Nahazo Loka Tamin’ny Fetiben’i Havana ny Filma ‘Puro Mula’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2018 12:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, Español, Italiano, English
Niroborobo ny famokarana filma Latino-Amerikana ary nampiforona ny “Taona Volamenan'ny” sinema amerikana latina amin'izao taonjato faha-21 izao. Nisy vondrona mpamokatra filma manerana ny faritra nanatontosa sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe “Puro Mula” (jereo eto ny sombiny) tany amin'ny tanàna itatr'i Guatemala City. Na izany aza, tsy mbola vita izany sarimihetsika izany noho ny fahakelezan'ny tetibola [es] hoy i Julio Flores.
Hacer Cine en Guatemala [es] namintina ny fizotran'ny tantara, izany nitranga tao anatin'ny andro iray. Joel Fonseca, kamolahy 28 taona, mbola monina miaraka amin'ny ray aman-dreniny, no kintan'ny filma. Nomena andraikitra hanara-maso ny zanaky ny mpiray tampo amin'ny ray aman-dreniny iray izy, saingy nandao ny trano tsy nisy nahamarika io zazalahy tokony narahi-maso io, ka dia tsy maintsy nivoaka ny trano i Joel hitady azy.
Enrique Pérez avy ao amin'ny vondrona Best Picture System, izay mamariparitra azy ireo ho mihoatra noho ny vondrona tanora manatontosa sarimihetsika, araka izay nosoratan-dry zareo ao amin'ny pejiny MySpace [es], no nanatontosa ny filma :
Tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra, notolorana ny “Lokan'ny Aorian'ny Famokarana Amerikana Latina” tao amin'ny Fetiben'ny Film ao Havana ny “Puro Mula”, araka ny nambaran'ny bilaogera El Lugareño. Niarahaba azy ireo tamin'ny filma vao novokarin-dry zareo ny bilaogera Pro+.
Manana ny bilaoginy manokana ny Puro Mula, koa aza miala raha hijery ny famoahana azy voalohany amin'ny marsa 2010.